Momba anay - Wuxi Lusheng Intelligent Equipment Co., Ltd.
Wuxi Lusheng Intelligent Equipment Co., Ltd dia miorina amin'ny tanàna fizahan-tany mahafinaritra sy malaza- Wuxi. Ny orinasanay dia naorina tamin'ny 2004, efa fampandrosoana maharitra amin'ny alàlan'ny fampidirana sy fanofanana ny talenta, ny fanamarinana ny fitantanana sy ny fananganana ny kolotsaina orinasa. Ankehitriny ny orinasanay dia manana fananana mihoatra ny folo tapitrisa ary manarona faritra 6000 metatra toradroa. Ny vokatray lehibe indrindra dia misy kojakoja fanamafisam-peo mandeha ho azy, fanapahana CNC sy fitaovana beveling, tsipika Pipe / Wind Tower Product sns. Ireo vokatra ireo dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny milina fanaovana injeniera, milina simika, famokarana boiler / pressure pressure, milina fitrandrahana metalurgique, rafitra hery niokleary sns. Ny vokarinay dia amidy tsara any amin'ny faritany mihoatra ny 20 amin'ny tsena anatiny, ary vokatra marobe no aondrana any Azia atsimo atsinanana, Eropa, Amerika avaratra ary amerika atsimo, Oceania, sns.
Nandritra ny taona maro ny orinasanay dia nanolo-tena hikaroka, hampivelatra, ankehitriny dia manana tanjaka ara-teknika matanjaka sy fahaizan'ny famolavolana izahay. Nahazo mari-pahaizana ISO9001 Quality System Certificate sy fenitra CE Eoropeana izahay.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sambo fanerena, petrochemicals, tobin-herinaratra, milina mavesatra, sambo, rafitra vy ary indostria hafa. Ary manangana serivisy manokana: manome kojakoja ilaina amin'ny rafitra vy, fikojakojana ary serivisy fiatoana hafa. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana sy fanavaozana mitohy, ny orinasa dia nahatratra fivoarana mitohy, haingana sy salama amin'ny alàlan'ny fandrosoana ara-tsiansa sy ara-teknolojia, fitantanana manara-penitra sy fananganana kolotsaina orinasa. Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia: andiana fitaovana fanamafisam-peo, toeram-piasana welding manokana, tsipika famokarana rafitra vy, fitaovana fanaraha-maso isa, fitaovana fanadiovana fanadiovana, fitaovana famokarana tilikambo rivotra. Ny vokatra dia amidy amina faritany maherin'ny 20 manerana ny firenena, ary aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 30 any Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient, Eropa ary Amerika. Ary miaraka amin'i "Oerlikon"; "Alston" sy orinasa iraisam-pirenena matanjaka 500 hafa dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa tsara sy maharitra.
Miompana amin'ny olona, ​​marina ary mahay mandanjalanja, manavao sy mahomby ary miverina amin'ny fiaraha-monina.
Ny fahambonian'ny fahatokisana, ny mpampiasa aloha, ny fahafaham-po kalitao, ny fandefasana ara-potoana, dia vonona ny hiara-miasa aminao am-pahatsorana ary hampivelatra ny tanana.
Miarahaba tsara an'ireo mpanjifa vaovao sy taloha, mahatakatra tsara ny filan'ny mpanjifa; fanaraha-maso ny fizotran'ny kalitao henjana, miantoka ny tsingerin'ny fandefasana fifanarahana; Fanaraha-maso kalitao ara-potoana, ary tantano haingana ny fanoherana kalitao.